AKHRISO:Siyaasi Cabdi Shakuur Oo Wada Arrimo Halis Ku Ah Muqdisho | khaatumonews
AKHRISO:Siyaasi Cabdi Shakuur Oo Wada Arrimo Halis Ku Ah Muqdisho
Aug 14, 2018 - Aragtiyood
LAASCANOD (KHAATUMO NEWS24.COM)-Siyaasiga CC Shakuur oo kamid ah Siyaasiyiinta aadka uga soo horjeeda siyaasada dowlada Somalia ayaa waayadani culeyska saaraya sida jahwareer amni loogu ridi lahaa magaalada Muqdisho ee caasimada Somali.
CC Shakuur oo inta badan ku sugan dalka dibadiisa ayaa codkiisa mucaaradnimo kusoo koobay ka hadalka arrimaha amniga.
CC Shakuur oo naawilaaya in mar un uu qabto mid kamid ah xilalka ugu sareeya dalka ayaa u muuqda mid ay ka luntay diirada, waxa uuna sabab u noqonayaa halis amni darro oo usoo dagdagta dadka reer Muqdisho.
CC Shakuur, waxa uu inta badan shaqo iyo dhaliil siyaasadeed ka dhigtaa arrimaha amniga waxaana xusid mudan in arrintaasi ay ku dhalatay kadib weerarkii lagu qaaday hooygiisa xili uu kulan kula jiray Xildhibaano iyo Siyaasiyiin ka tirsan garabka mucaaradka.
Tan iyo weerarkii lagu qaaday laguna dhaabacay CC Shakuur waxa uu naceyb xoogan u qaaday Hay’adaha amniga dalka gaar ahaan Hay’adda Nabadsugida oo xiligaa u dhigtay cashar lama ilaaban ah.
Haddaba CC Shakuur ayaa u muuqda mid caqabad ku ah amniga iyo xasiloonida ka jirta magaalada Muqdisho maadaama uu xooga saaro arrimaha Gobolka waxaana tusaale u ah Seddex qodob oo kala ah:
1-In dhaliishiisa amni ay tahay mid ku kooban amniga Muqdisho, waxa uuna durbaanka u garaacayaa sida jahwareer amni loo galin lahaa Muqdisho oo xudun u ah dalka.
2-Ka hor inta aan la burburin ciidamada xasilinta wax uu ku qeyla dhaaminaayay inaan dhismaha ciidamadaasi loo marin sharci waxa uuna si joogta ah ugu baaqayay in la kala diro ciidamada, iyadoo ay xusid mudan tahay in ciidamada keliya ee arrimaha amniga looga cabsan jiray ay ahaayen kuwa xasilinta.
3- Goortii la burburiyay ciidamada xasilinta waxa uu CC Shakuur mar kale ku qeyla dhaamiyay in Taliska Booliska aysan ka raali noqon in lagu soo daro ciidamada xasilinta oo uu ku eedeeyay inaysan u qalmin Boolis, waxa uuna qodobkaani muujinayaa in CC uusan Muqdisho u ogoleyn amni iyo xasilooni isaga oo fiirsanaaya danihiisa Siyaasadeed.
Sidoo kale, CC Shakuur waxa uu Xildhibaanada qaar dhaqaale ku siiyaa inay ka hadlaan wax waliba oo lagu bahdili kara sumcada dowlada Somalia, si ay ugu sahlanaato inuu ku cod darsado Xildhibaanada jeedineysa dhaliilaha.
Su’aasha ugu badan ee kadhalata dhaliilaha CC Shakuur ayaa waxaa kamid ah sababaha uu uga hadli la’yahay dhacdooyinka kale ee kadhaca Gobolada dalka, halka ay dhaliishiisu tahay mid ku kooban Gobolka Banaadir.
Dhinaca kale, CC Shakuur oo gaashaan u ah dowladaha carbeed ayaa u muuqanaaya mid loo adeegsanaayo burbur ka dhaca Somalia, maadaama dhaliishiisu tahay
KHAATUMO news 24